Ama-Emulsifiers e-Ultrasonic - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-emulsion uhlelo olunezigaba ezimbili lweziphuzo ezimbili ezingafundeki, lapho isigaba esisodwa, isigaba esibizwa ngokuthi sangaphakathi noma esihlakazekile, sisatshalaliswa njengamaconsi amancane kwesinye, isigaba esibizwa ngokuthi sangaphandle noma esiqhubekayo. Ukulungiselela i-emulsion, ngokuvamile ukufakwa kwamandla kuhlelo lwezigaba ezimbili kuyadingeka. Amandla we-shear Ultrasonic afakazelwe kahle ukuthi asebenza kahle kakhulu ukukhiqiza ama-emulsions azinzile wesikhathi eside ngamaconsi asayizi we-nano nekhwalithi ephezulu.
Ukuqina Kwe-Emulsion Okuthuthukile kwe-Ultrasonically
Imiphumela ebonakalayo ye-ultrasound ebangelwa yi-acoustic cavitation iholela ekuphazanyisweni kwamaconsi kawoyela namanzi futhi ikusize ngaleyo ndlela ukwakheka kwama-emulsions we-O / W ne-W / O azinzile ngosayizi wamaconsi amancane ngobukhulu be-micron- nano-size. Ngenxa yosayizi omncane wamaconsi kanye nendawo yayo ephezulu, ama-nanoemulsions anikela ngezakhiwo eziphakeme ngokweqile ze-bioactive, ezibalulekile ekudleni nakwizithasiselo, okwenziwa ngamakhemikhali nokukhiqizwa kwezimonyo. Ngenxa yosayizi wamaconsi emizuzu, i-bioactive compound ingangena kumaseli ngokushesha. Futhi kwisayensi yezinto ezibonakalayo nasembonini, ama-nano-emulsions abalulekile ekwenziweni kwezingubo zokusebenza okuphezulu, opende, ama-polymers nezinye izinhlanganisela. Ama-nanoemulsions alungiselelwe nge-Ultrasonically ngokuvamile azinzile kakhulu kunama-macroemulsions futhi awakhombisi ukudilika, ukubumbana noma ukugeleza.
Amandla we-Ultrasonic Emulsification
Iqoqwana noma okuqhubekayo
Iziphuzo eziphansi ezinama-viscous
Ukuzala kabusha / ukuphindeka
UP400St – Idivayisi ye-400W ye-ultrasonic ye-oil-in-water (O / W) nano-emulsions
I-Ultrasonic Emulsification esebenza kahle kakhulu
UThaha et al. (2020) baphetha ephepheni labo lokubuyekeza ukuthi i-High-Intensity Ultrasonics (HIU) "ingasetshenziselwa ukuthuthukisa izakhiwo ze-emulsifiers zokudla ezinjengamaprotheni kanye nama-polysaccharides kanye nokwenza ngcono ukuzinza kwe-emulsions yazo. Amaphrotheyini-polysaccharide axinzekile ama-emulsions akhiqizwe yi-HIU akhombise ukuzinza okungcono ekulweni nengcindezi yezemvelo kunama-emulsions aqiniswa izingxenye ezithile. Ngaphezu kwalokho, ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi ama-homogenizers e-HIU ayonga amandla kakhulu kune-homogenizers kanye nengcindezelo encane kakhulu. ” (UThaha et al., 2020)
Izici Ezithonya Ikhwalithi ye-Emulsion
Usayizi wamaconsi asho (uthonywe inqubo ye-emulsification)
Ukusatshalaliswa kosayizi wamaconsi (kuthonywe inqubo ye-emulsification)
I-viscosity yesigaba sangaphakathi
I-viscosity yesigaba esiqhubekayo
Ukuhlushwa kwesigaba samafutha
I-pH yesigaba esiqhubekayo
Izici ezibonakalayo ze-emulsion
I-Ultrasonic nano-emulsification isetshenziselwa ukukhiqiza ama-emulsions asebenza kahle wezinto zokusebenza eziphezulu, upende, ukumbozwa, ukudla, i-pharma, nezimonyo.
Ukulungiswa kwe-Ultrasonic kwe-oyile-emanzini (i-O / W) emulsion (amanzi abomvu / uwoyela ophuzi). Imizuzwana embalwa ye-sonication iguqula izigaba ezimbili zamanzi namafutha zibe i-emulsion enhle.
Ama-Emulsifiers Wokusebenza Okuphezulu
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngamandla amakhulu, ama-emulsifiers e-low-frequency ultrasonic nganoma yisiphi isilinganiso sokucwaninga, ukuthuthukiswa kwenqubo, i-R&D kanye nokukhiqizwa kwezimboni kwemifudlana emikhulu kakhulu yevolumu. Iphothifoliyo yethu ebanzi inikeza iprosesa efanelekayo ye-ultrasonic nganoma yisiphi isayizi nanoma iyiphi imboni.
Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimboni e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7/365. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Yonke imingcele yenqubo ingalawulwa ncamashi futhi ibhekwe nge-smart software.
Izinzuzo ze-Hielscher Ultrasonics Emulsifiers
nganoma yimuphi umthamo wevolumu / wokukhiqiza
yanoma yimuphi umkhakha
ukusebenza kahle nokuqinisa inqubo
wokuqhutshwa kwe-batch ne-inline
isebenziseka ngezindlela eziningi
ukugcinwa okuqinile, okuphansi
kulula ukuyifaka noma ukuyifaka kabusha
Isiphenduli se-Ultrasonic nge MultiPhaseCavitator ngokuthuthuka kwe-nano-emulsification
MultiPhaseCavitator – Uhlelo lwe-Ultrasonic Injection
Isikhombi seMultiPhase – MPC48insert – ukufaka okuyingqayizivele kwama-reactors we-Hielscher flow cell. Idizayini ye-MultiPhaseCavitator ifaka ama-cannulas angama-48 afaka isigaba sesibili se-emulsion ngqo endaweni eshisayo yokuzikhandla. Endaweni ye-cavitation, imicu emihle yesigaba sesibili esifakiwe iyahlukaniswa ngamagagasi e-ultrasonic we-20kHz. Lokhu kusho ukuthi uketshezi olufakiwe lunqunywa imivimbo engu-20 000 yokudlidliza ngomzuzwana, ekhiqiza amaconsi amaminithi angajwayelekile ebangeni le-nano. I-shear ye-ultrasonic, amagagasi ashaqisayo kanye ne-turbulence emulsifying la mathonsi amancane ngaphakathi kwesigaba esiqhubekayo futhi akhiqize i-nano-emulsion ephakeme yokuzinza okuphezulu.
Ufuna Ukuthenga i-Ultrasonic Emulsifier?
Xhumana nathi yazi ngokugcwalisa ifomu lokuxhumana elingezansi, usithumela i-imeyili, noma uyasibiza!
Ithimba lethu elinolwazi oluningi lizojabula ukuxoxa nawe ngesicelo sakho se-emulsion kanye nokuncoma uhlelo olufanele kakhulu lwe-emulsifier ye-ultrasonic!
Uhlu lokuhlola lokuthenga i-Ultrasonic Emulsifier ukufeza izidingo zakho
imingcele elawulwa kahle
ulayini scalable kunoma yimuphi usayizi
isoftware enezilungiselelo zokuhlelwa kwe-sonication
ama-sonotrode nezinsiza ezitholakalayo
Kuyini i-Emulsion? – Incazelo yegama elithi “Emulsion”
I-emulsion yizinhlelo zoketshezi eziqukethe okungenani iziphuzo ezimbili ezingafinyeleleki, lapho olunye uketshezi lusakazeka kolunye njengamaconsi amancane. Isigaba samaconsi amancane, asatshalaliswa abizwa ngokuthi ahlakazekile noma isigaba sangaphakathi, kanti esinye isigaba sibizwa ngokuthi isigaba esiqhubekayo noma sangaphandle. Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zemimulsions, ehlukaniswa phakathi: Amafutha-in-water (O / W) nama-water-in-oil (W / O) emulsions. Emulsion ka-oyela-emanzini (O / W), isigaba sangaphakathi siwuketshezi oluyimbangela kawoyela noma uwoyela, kanti isigaba sangaphandle singamanzi noma uketshezi oludabukisayo lwamanzi. Emulsion yamanzi (i-W / O) emulsion, isigaba sangaphakathi siwuketshezi olufana namanzi, kanti isigaba sangaphandle singuketshezi olufana nolo uwoyela.
Ama-emulsions amaningi adinga i-ejenti yokuqhafaza, eyaziwa njenge-stabilizer noma i-surfactant. Usayizi wamaconsi udlala indima ebalulekile maqondana nokuqina kwe-emulsion. Okuncane ngosayizi wamaconsi, ukuzinza okungaphezulu yi-emulsion.